ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အီတလီ အေးဝေး
အာမဂေဒုန်အမည်ရှိသောအရပ်တွင် ‘အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏နေ့ကြီး၌ စစ်တိုက်ခြင်း’ ကားအဘယ်နည်း။ အဘယ်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမည်နည်း။—⁠ဗျာ. ၁၆:၁၄၊ ၁၅။
ရိုးရိုးလေးဖော်ပြရသော် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲဟူသည်မှာ ယေဟောဝါ၏ခန့်အပ်ခံဘုရင် ယေရှုခရစ်က ဘုရားသခင့်ရန်သူများကို ဖျက်ဆီးတော်မူမည့် အနာဂတ်ကမ္ဘာချီစစ်ပွဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုရန်သူများမှာ “နတ်ဆိုး၏ဝိညာဉ်” ကြောင့် စုရုံးလာကြသည့် ‘လောကတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသော ရှင်ဘုရင်တို့’ ဖြစ်ကြပြီး သူတို့သည် ‘အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏နေ့ကြီး၌ စစ်တိုက်ခြင်းအလို့ငှာ ဟေဗြဲဘာသာအားဖြင့် အာမဂေဒုန်အမည်ရှိသောအရပ်၌’ စုဝေးကြ၏ဟု သမ္မာကျမ်းစာတွင် ရှင်းပြထားသည်။—⁠ဗျာ. ၁၆:၁၄၊ ၁၅။
စစ်ဆင်နွှဲကြမည့်အဖွဲ့များ စုဝေးရာအရပ်သည် ပကတိနေရာဒေသမဟုတ်ပါ။ အချို့ဘာသာပြန်ကျမ်းများတွင် “ဟာမေဂေဒုန်” ဟုပြန်ဆိုထားသော အာမဂေဒုန်၏အမည်မှာ “မေဂိဒ္ဒေါတောင်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ (ဗျာ. ၁၆:၁၆၊ သမ္မာ) ထိုအမည်ဖြင့်ခေါ်သော တောင်တစ်လုံးမျှ မရှိခဲ့ဖူးချေ။ ထို့ပြင် ‘လောကရှင်ဘုရင်တို့နှင့် သူတို့၏ဗိုလ်ခြေများတို့သည်’ စာသားအတိုင်း အရပ်ဒေသတစ်ခုတည်း၌ မစုရုံးနိုင်ကြချေ။ (ဗျာ. ၁၉:၁၉) သို့အစား “အရပ်” ဟုဆိုရာ၌ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအုပ်စိုးရှင်များနှင့် ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံအားပေးနေကြသူများကို ယေဟောဝါနှင့် “ဘုရင်တို့၏ဘုရင်၊ သခင်တို့၏သခင်” ယေရှုခရစ်၏ စစ်အာဏာအောက်ရှိ “ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေတို့” နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားသို့ ရပ်တည်စေသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။—⁠ဗျာ. ၁၉:၁၄၊ ၁၆။
“အာမဂေဒုန်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို ရှေးဣသရေလလူတို့၏မြို့ဖြစ်သော မေဂိဒ္ဒေါမြို့နှင့် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်မှာ ထူးခြားလှသည်။ ကရမေလတောင်တန်းအရှေ့ဘက်တွင် မဟာဗျူဟာမြောက်စွာတည်ရှိသော ဤမေဂိဒ္ဒေါမြို့သည် ထိုခေတ်က အဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့် စစ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို ကြီးစိုးခြယ်လှယ်ခဲ့သည်။ ယင်းဒေသသည် အပြီးသတ်စစ်ပွဲများဆင်နွှဲရာစစ်တလင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဣသရေလတရားသူကြီး ဗာရက်သည် ဗိုလ်ချုပ်သိသရဦးစီးသည့် အားကြီးသောခါနာန်လူမျိုးအား စစ်ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သောအရပ်မှာ “မေဂိဒ္ဒေါအိုင်” ရှိရာအရပ်ဖြစ်သည်။ (တရားသူကြီး ၄:၁၂-၂၄; ၅:၁၉၊ ၂၀) ထိုအနီးအနားတွင်ပင် တရားသူကြီး ဂိဒေါင်သည် မိဒျန်လူမျိုးများကို အပြတ်အသတ်အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ (တရားသူကြီး ၇:၁-၂၂) သမ္မာကျမ်းစာက မေဂိဒ္ဒေါမြို့ကို ရောက်လာမည့်စစ်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်ဖော်ပြခြင်းက ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်မှတစ်ဆင့် ရန်သူစစ်တပ်အားလုံးအပေါ် အပြတ်အသတ်အောင်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ချစေသည်။
အဘယ်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမည်နည်း။ အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖောက်ပြန်ယိုယွင်းမှုနှင့် ဆိုးသွမ်းမှု ရှိသမျှကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မည်။ ယင်းက လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက် နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးခေတ်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မည်။ (ဗျာ. ၂၁:၁-၄) ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ မေတ္တာပါကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ဤကမ္ဘာမြေသည် ဖြောင့်မတ်သူများ ထာဝစဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်သွားမည့် ပရဒိသုတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။—⁠ဆာလံ ၃၇:၂၉။
က၀၇ ၂/၁ စာ. ၃၁
မှန်ရာကိုပြောဆိုခြင်း အခြားသူတို့ထံမှသာ မျှော်လင့်ရမည်လော
ကလေးများ ထံမှ အဘယ်အရာသင်ယူနိုင်သနည်း
အာမုတ် သဖန်းသီး ဆွတ်သောသူသို့မဟုတ် ဖောက်သောသူလော
ယေဟောဝါသည် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်တတ်သော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏
သင်၏တန်ဖိုးထားလေးမြတ်တတ်သည့်စိတ်ကို ဘယ်တော့မျှ မပျောက်သွားစေနှင့်
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇